यी हुन् संसारकै सबैभन्दा खुशी मानिस, जो २५ वर्षअघि अन्तिम पटक दुखी बनेका थिए
एजेन्सी । भन्ने गरिन्छ ‘नयाँ वर्षले जीवनमा नयाँ नयाँ कुराहरु प्राप्त गर्न सकियोस्, खुशीका साथ नयाँ वर्ष बितोस् ।’ एउटा मानिसले नयाँ वर्षमा के अपेक्षा राख्छ त ? सबैले सकारात्मक सोच नै बनाएका हुन्छन् । तर तपाई खुशी कसरी हुन सक्नुहुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । के मानिस सँधै खुशी हुन्छ त ? यसको जवाफ हो म्याथ्यु रिकार्ड । जो नेपालको एक गुम्बामा पनि बसेका थिए ।
यी मानिस संसारकै सबैभन्दा खुशी मानिस हुन् र यिनी २५ वर्ष अगाडि अथवा सन् १९९१मा अन्तिम पटक दुखी भका थिए । यी मानिस सधैं खुशी हुनुको कारण पत्ता लगाउन अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयले अध्ययन समेत गरेको थियो । त्यो पनि २५६ सेन्सर लगाएर । यूनाइटेड नेशन (UN) ले उनलाई संसारकै सबैभन्दा खुशी मानिस मानेको छ ।
म्याथ्युले भनेका छन्, ‘म फ्रान्समा जन्मेको हुँ । सन् १९७१ देखि लगातार खुशी हुन बानी पारेको छु । करीब ४५ वर्षको अन्तरालमा मैले आफैंमाथि पनि अनुसन्धानहरु गरेँ । खुशी हुनका लागि वैज्ञानिकदेखि अरु अनेक तरिकाहरु अपनाए । जुन मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सम्पति हो ।’
बताइएअनुसार म्याथ्यु खुशी रहनका लागि मेडिटेशन देखि लिएर केही अफ्ट्यारा तरिकाहरु अबलम्बन गर्छन् । ७० वर्षीय भनेका छन्, ‘पहिला उनी आजका मानिसहरु जस्तै साना साना कुरामा पनि चिन्तित हुन्थें । सन् १९७१ मा उनी जब दार्जिलिङ आए त्यसबखत उनलाई गुरु डिल्गो क्यान्त्से रिन्पोचेले दैनिक जीवनमा खुशी हुन सिकाए । बिस्तारै उनीमा खुशी हुने बानी पर्‍यो । त्यो नै मेरो जीवनमा यूटर्न बन्यो । त्यसपछि म फ्रान्स छोडेर दार्जिलिङ-नेपाल बस्ने फैसला लिएँ ।’
सन् १९९१ मा उनको गुरुको मृत्यु हुँदा अन्तिम पटक दुखी बनेका थिए । उनले एक अन्तरवार्तामा बताएअनुसार आफ्ना प्रिय गुरु डिल्गो क्यान्त्से रिन्पोचेको मृत्यु हुँदा अन्तिम पटक दुखी भएका थिए ।
उनले हाँस्दै भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म त म विश्वकै सबैभन्दा खुशी मानिस बनेको छु । तर अब यो नै मरो लागि दुख बन्न गएको छ कि जब मलाई मानिसहरु खुशीको राज सोध्छन् ।’
संसारकै खुशी मानिसclose